नयाँ डोमेन नियमित अभिव्यक्ति (Regex) WordPress मा रिडिरेक्ट गर्दछ Martech Zone
नयाँ डोमेन नियमित अभिव्यक्ति (Regex) WordPress मा रिडिरेक्ट गर्दछ
मंगलवार, सेप्टेम्बर 22, 2020 मंगलवार, सेप्टेम्बर 22, 2020 Douglas Karr
पछिल्ला केही हप्ताहरू, हामी एक ग्राहकलाई WordPress मा एक जटिल माइग्रेसन गर्न सहयोग गर्दै छौं। ग्राहकसँग दुई उत्पादनहरू थिए, जुन दुबै लोकप्रिय भएको छ कि तिनीहरू व्यापार, ब्रान्डि,, र सामग्री अलग डोमेनमा अलग गर्नुपर्दछ। यो एकदम उपक्रम हो!
तिनीहरूको अवस्थित डोमेन राखिएको छ, तर नयाँ डोमेनमा त्यस सामग्रीको सम्बन्धी सबै सामग्रीहरू हुनेछन् ... छविहरू, पोष्टहरू, केस स्टडीहरू, डाउनलोडहरू, फारमहरू, ज्ञान आधार इत्यादिबाट। एकल सम्पत्ति सम्झना छैन।
एकचोटि हामीसँग नयाँ साइट भएको र सञ्चालनमा रहँदा, स्विच तान्न र लाइभ राख्नको लागि समय आइसकेको थियो। यसको मतलब यो हो कि यस साइटसँग सम्बन्धित प्राथमिक साइटबाट कुनै URL हरू नयाँ डोमेनमा पुन: निर्देशित गर्नुपर्‍यो। हामीले साइटहरू बीच धेरै जसो पथहरू सुसंगत राख्दछौं, त्यसैले कुञ्जीले उचित पुनःनिर्देशनहरू सेट अप गर्दै थियो।
WordPress मा Plugins redirect
त्यहाँ दुई लोकप्रिय प्लगइनहरू उपलब्ध छन् जुन वर्डप्रेसको साथ पुनःनिर्देशनहरूको प्रबन्ध गर्न ठूलो काम गर्दछ।
पुनप्रेषण - मार्केटमा सायद उत्तम प्लगइन, नियमित अभिव्यक्ति क्षमताहरू र तपाईंको पुनःनिर्देशनहरू प्रबन्ध गर्नका लागि कोटीहरूको साथ।
Rankmath SEO - यो हल्का एसईओ प्लगइन ताजा हावाको सास छ र मेरो सूची बनाउँछ सर्वश्रेष्ठ वर्डप्रेस प्लगइनहरू बजारमा। योसँग यसको प्रस्तावको रूपमा पुनःनिर्देशन गरिएको छ र यदि तपाईं माईग्रेट गर्नुहुन्छ भने रिडिरेसनको डाटा आयात गर्दछ।
यदि तपाईं एक व्यवस्थित WordPress होस्टिंग ईन्जिन जस्तै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ WPEngine, ती व्यक्तिले तपाईंको साइटमा कहिले पछाडि हिर्काउनु अघि रीडायरेक्टहरू ह्यान्डल गर्ने मोड्युल छन् ... एक राम्रो राम्रो सुविधा जसले तपाईंको होस्टिंगमा विलम्बता र ओभरहेड कम गर्न सक्दछ।
र, अवश्य पनि, तपाई सक्नुहुन्छ तपाईंको .htaccess फाइलमा नियम पुनर्निर्देशन लेख्नुहोस् तपाईंको WordPress सर्भरमा ... तर म यसलाई सिफारिस गर्दिन। तपाईं एक सिन्ट्याक्स त्रुटि हुनुहुन्छ तपाईंको साइटलाई पहुँचयोग्य बनाउनबाट टाढा!
कसरी एक Regex पुनर्निर्देशन सिर्जना गर्न
मैले माथि प्रदान गरेको उदाहरणमा, यो सामान्य देखिन्छ कि साधारण डोमेनलाई नयाँ डोमेन र सबफोल्डरमा एक सबफोल्डरबाट रिडाइरेक्ट गर्न मात्र हो:
त्यहाँ एक समस्या छ, जबकि। के हुन्छ यदि तपाईंले लि links्कहरू र अभियानहरू वितरण गर्नुभयो जुन अभियान ट्र्याकिंग वा रेफरलहरूको लागि क्वेस्टस्ट्रिंग छ? ती पृष्ठहरू राम्रोसँग पुनःनिर्देशित हुँदैन। सायद URL हो:
किनकि तपाईंले सटीक मेल लेख्नु भएको छ, त्यो URL कहिँ पनि रिडाइरेक्ट हुँदैन! त्यसोभए, तपाइँ यसलाई नियमित अभिव्यक्ति बनाउन र युआरएलमा वाइल्डकार्ड थप्न लोभ्याउन सक्नुहुन्छ:
यो धेरै राम्रो छ, तर अझै समस्याहरु को एक जोडी छन्। पहिले, यो कुनै URL सँग मिल्नेछ / product-a / यसमा र ती सबैलाई समान गन्तव्यमा पुनःनिर्देशित गर्नुहोस्। त्यसो भए यी सबै बाटोहरू समान गन्तव्यमा पुनःनिर्देशित हुनेछन्।
नियमित अभिव्यक्तिहरू एक सुन्दर उपकरण हुन्, यद्यपि। पहिले तपाईले आफ्नो स्रोतलाई अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने निश्चित गर्न फोल्डर फोल्डर पहिचान गरियो।
त्यसले सुनिश्चित गर्दछ कि केवल प्राथमिक फोल्डर स्तर ठीकसँग पुन: निर्देशित हुनेछ। अब दोस्रो समस्याको लागि ... कसरी क्वेस्ट्रिring जानकारी नयाँ साइटमा कब्जा हुनेछ यदि तपाईंको पुनर्निर्देशन समावेश गर्दैन भने? ठिक छ, नियमित अभिव्यक्तिको लागि यसको एक उत्तम समाधान छ:
वाइल्डकार्ड जानकारी वास्तवमा क्याप्चर गरिएको छ र चर प्रयोग गरेर गन्तव्य जोडिएको छ। त्यसो ...
यसमा राम्रोसँग पुनःनिर्देशित हुनेछ:
दिमागमा राख्नुहोस् कि वाइल्डकार्डले कुनै पनि सबफोल्डरलाई पुनःनिर्देशित गर्न सक्षम गर्दछ, त्यसैले यो पनि सक्षम हुनेछ:
यसमा पुनःनिर्देशित हुनेछ:
अवश्य पनि, नियमित अभिव्यक्तिहरू यो भन्दा धेरै जटिल हुन सक्छ ... तर मँ कसरी वाइल्डकार्ड रिजेक्स रीडायरेक्ट सेट अप गर्ने छिटो नमूना प्रदान गर्न चाहान्छु जुन नयाँ डोमेनमा सबै चीज सफासँग पास गर्दछ!
टैग: पुनर्निर्देशितपुनप्रेषणपुनर्निर्देशन प्लगइनरेगेक्सनियमित अभिव्यक्तिWordPress प्लगइन
शार्सप्रिंग: एक व्यापक र सस्तो बिक्री र मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्म
Salesmachine: सास परीक्षण रूपान्तरण र ग्राहक दत्तक बढाउनुहोस्